पूरै गाउँलाई बन्धक बनायो भालुको बथानले - ज्ञानविज्ञान
भालुको समूहले गाउँलाई चारैतिरबाट घेरेपछि वन विभागको टोलीले उक्त गाउँका जनताको सुरक्षाका लागि गस्ती गरिरहेको छ । भालुले गाउँलाई नै बन्धक बनाएको घटना कहिल्यै सुन्नुभएको छ ? सायद छैन होला । यस्तो घटना हालै रुसमा घटेको छ ।
रुसको एक गाउँलाई ध्रुविय भालु अर्थात् पोलर बियरको एक झुण्डले पछिल्लो केही दिनयता बन्धक बनाएको छ । भालुको समूहले गाउँलाई चारैतिरबाट घेरेपछि वन विभागको टोलीले उक्त गाउँका जनताको सुरक्षाका लागि गस्ती गरिरहेको छ ।
२० को संख्यामा रहेका भालुहरु यति आक्रामक छन् की घरका ढोका फोडेर घरभित्र छिर्ने कोसिस गरिरहेका छन् । आखिर भालुले गाउँलाई किन बन्धक बनाए त ? वास्तवमा यी भालुहरु आफ्नो सिकारको खोजी गर्दै गाउँसम्म आइपुगका हुन् ।
समाचार अनुसार उक्त गाउँसँगै जोडिएको एक पहाडि इलाकामा वालरस नामक स्तनधारी जनावर प्रजननका लागि जाने गर्दछ । वालरसको उक्त प्रजजनस्थलमा अचानक ध्रुविय भालुको समूह पुग्यो । पोलार भालुले प्रजननरत वालरसमाथि आक्रमण गरी केहीलाई सिकार बनाए र धेरै वालरसहरु त्यहाँबाट भागेर पहाडको तल खोँचसम्म आइपुगे र त्यहीँ रहेको गाउँमा प्रवेश गरे ।
वालरस गाउँ छिरेपछि भालुहरु पनि आफ्नो सिकार खोज्दै गाउँमा प्रवेश गरी आm्नो सिकार वालरस नउम्किउन् भनेर गाउँलाई चारैतर्फबाट घेराबन्दी गरेको बताइएको छ ।
Topics #गाउ #भालु
Don't Miss it कति स्वस्थकर छ त चिज ?
Up Next यी हुन् खतरनाक रोगहरु निदाएकै बेलामा मृत्यु हुने
किन परिवर्तन हुन्छ निप्पलको रङ गर्भावस्थामा ? थाहा पाउनुस्
महिलालाई थाहा होला कि गर्भावस्थामा तपाईंको स्तनको आकारमा परिवर्तन हुन्छ । स्तनमात्र नभई निप्पलको रङमा पनि परिवर्तन हुने गर्दछ ।…
यस कारण पेटमा ग्यास भरिन्छ जनिराखौ
हाम्रो खानपानकै कारण पेटमा ग्यास उत्पादन हुन्छ । खानपानमा ख्याल गरेमा ग्यास भरिने समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । हामी धेरैले अपानवायु…